Ku saabsan soo saaraha iftiinka ledhka, soo saaraha iftiinka pendant | Huayi Iftiin
Xirfadlayaasha Nalalka LED-ka -Huayi Iftiin
Habka Casriga ah
Habka caadiga ah
Qaabka Dabiiciga ah
Qaabka Xadhkaha goostay
Xalka Iftiinka Caadiga ah
Dhismaha Xalalka Iftiinka
Xalalka Iftiinka Muuqaalka
Guriga > Ku saabsan
In ka badan 30 sano oo beerasho degdeg ah
Huayi waxaa la aasaasay 1986, waxay noqotay bixiyaha xallinta iftiinka dhammaystiran ee caanka ah ee warshadaha. Iyadoo in ka badan 30 sano oo horumarin ah, Huayi waxay si guul leh isugu dhejisay madal kheyraad oo ka timid dhammaan silsiladaha warshadaha, oo leh iibka iyo shabakadaha adeegga gudaha iyo dibedda.
Raadka Huayi waxa uu gaadhay min ganacsi ilaa mashruucyo dawladeed, alaabooyin kala duwan guriga, xafiis ilaa huteel iyo muuqaalka bannaanka. Awood u leh in ay bixiso xalalka adeegyada qiimaha lagu daray marka loo eego mashaariicda, ayaa lagu ammaanay lammaane caalami ah oo la isku halleyn karo sannado badan.
Markaan si dhow ula macaamilno macaamiisheena, waxaan dhageysanaa baahidooda waxaana ku dhaqaaqnaa codsiyadooda. Waxaan aaminsanahay in aasaaska aasaaska iskaashiga guul-guul ay yihiin awoodaha naqshadeynta iyo adeegga macaamiisha.
Xilliga cusub, iibka shirkadu si degdeg ah ayuu u kordhay. Balaayiin ganacsi sanad walba waxa ay u suurta galisaa shirkadu in ay noqoto kan ugu sareeya oo ay hogaamiso warshadaha nalka
Shirkaddu waxay ku hawlanayd sidii loo horumarin lahaa R& D iyo naqshadaynta alaabta iyo maalgashiga hal-abuurka sayniska iyo tignoolajiyada. R& Kooxda D waxa ay gaadheen qiyaas boqollaal qof ah, iyaga oo samaynaya cilmi-baadhis iyo nidaam horumarineed oo madax-bannaan R& D oo ah kan ugu weyn iyo isku dhafka wax soo saarka, barashada iyo cilmi-baarista oo ah caawiye. Waxa kale oo ay aas aastay iskaashato R& D oo leh Jaamacadda Tsinghua, Jaamacadda Zhongshan iyo machadyada kale ee tacliinta sare ee ku yaal madal xarunta tignoolajiyada gobolka iyo Xarunta Injineerinka.
9-10 / F, Huayi Plaza, No.1, South Zhongxing Avenue, Magaalada Guzhen, Magaalada Zhongshan, Gobolka Guangdong
Ma jeceshahay inaad nala soo xidhiidho
Keliya noo sheeg shuruudahaaga,waxaanu qaban karnaa wax ka badan intaad malayn karto.